Etu ị ga - esi bulie azụmaahịa gị zụrụ site na iji atụmatụ ndị ahịa dị ire | Martech Zone
Fraịdee, Nọvemba 27, 2020 Fraịdee, Nọvemba 27, 2020 Oliva Saikia
Iji nwee ọganihu ma lanarị na azụmaahịa, ndị nwe azụmaahịa ga-anakwere ọtụtụ usoro na usoro. A ndị ahịa njigide atụmatụ dị oke egwu n'ihi na ọ dị irè karịa atụmatụ ahịa ọ bụla ọzọ ma a bịa n'ịba ụba ego na ịlaghachi azụ ahịa azụmaahịa gị.
Inweta onye ahia ohuru nwere ike iri okpukpu ise karia ijide onye ahia gi. Bawanye njide ndị ahịa site na 5% nwere ike ịbawanye uru site na 25 ruo 95%. Onu ogugu oganihu nke ire ahia nye onye ahia nke i nwere ugbua bu 60 rue 70%, ebe ogha n’iru ire onye ahia ohuru bu 5 rue 20%.
Nchọpụta Ọpụpụ: Ahịa Ndobe Ahịa vs. Ahịa Inweta Ahịa
Inweta ndị ahịa ọhụrụ bụ ụzọ dị mkpa ma sie ike iji too gị azụmahịa, ma ịbawanye uru nke ndị ahịa ugbu a bụ ụzọ kachasị mfe iji bulie ego gị na uru gị. Planninghazi na imejuputa atumatu njigide ndị ahịa dị mkpa.
Ọ bụrụ na ị mepụtara ma bido usoro njigide ndị ahịa yana usoro mmemme iguzosi ike n'ihe maka ndị ahịa gị, kedu ihe na-esote ịkwalite njide ndị ahịa site na mmemme gị?
Wzọ isii ịbawanye nsonaazụ ndị ahịa
Mee ka ndị ahịa mara uru ọnụ ahịa gị - Ezubere mmemme njigide ndị ahịa gị maka uru bara uru ị na-enye ndị ahịa gị. Naanị ịchụpụ onyinye na-enwe olile anya na ha ga-etinyekwu ego ga-eweda ndị ahịa gị ala. Mee ka o doo anya na ị na-enye ndị ahịa gị onyinye ma na-eme atụmatụ ihe ị nwere ike inye ha, ihe ọ ga-efu, yana otu ọ ga-esi mata uru ị na-agwa ha.
Mee ka gị na mmadụ nwee mmekọrịta - Digitization na teknụzụ ohuru agbanweela otu anyị nwere ike isi bulie nkwukọrịta ma melite ahụmịhe ndị ahịa anyị. Azụmaahịa ọ bụla, gụnyere nke ọdịnala, na-agbanwezi ugbu a iji wulite mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Ọ dị oke mkpa itinye ndị na-azụ ahịa ahịa n'etiti ileta iji mee ka ha laghachi. Nkwukọrịta okwu gafere mmekọrịta nke onye ahịa gị na ndị ahịa gị.
Nọgidenụ na-emelite (Send-emails / SMS / Push-notification) - Ekwela ka ndị ahịa gị chefuo ika gị ma ọ bụ ọ bụrụ na ha nwere isi iyi. Imelite ndị ahịa gị gbasara nguzosi ike n'ihe ha nwere ike ime ka ụgwọ ha laghachikwute gị n'oge adịghị anya. Can nwere ike ịhọrọ izipu ozi ịntanetị, SMS, ma ọ bụ ọbụlagodi nkwupụta ngwa ngwa ozugbo maka ndị ahịa na-esoghị gị zụọ ahịa na nso nso a. Ọbụna a dị mfe Ekele mgbe ọ bụla zuo ike mbo mbuli mmekọrịta gị - na-eme ka ha na-eche kpọrọ na chọrọ.
Webata Mmemme VIP - Mmemme VIP na-akpali ndị ahịa ịchekwa ọkwá ha na akara gị. Ọtụtụ ụdị na-enye ndị ahịa VIP ọnọdụ ha. Mmemme VIP na-agba ndị ahịa gị ume ka ha chee onwe ha dịka akụkụ nke obodo gị kama ịbụ naanị ndị ahịa nkịtị.
Leverage data maka imeziwanye - nyochaa otu usoro ihe omume gị si eme, nyochaa akụkọ ya, na nyochaa data ị jidere na iguzosi ike n'ihe gị ga-enyere aka n'ịkwado atụmatụ gị maka ọdịnihu ịbawanye njide ndị ahịa. Data na-enye gị ohere ịkekọrịta ndị ahịa gị nke ọma. Nkewa ndị ahịa bụ ụzọ dị mma iji bulie nzaghachi nke mgbalị njigide gị site na ịhazi na ịkwụ ụgwọ ụgwọ na mpaghara ọ bụla.
Gụnye usoro ndozi - Ndị ahịa gị bụ ndị nkwado kachasị. Echefula ohere ịkwalite na ndị ahịa gị ịkwalite azụmahịa gị na ndị ọrụ ibe ha, ndị enyi, na ezinụlọ gị site na iji ụgwọ ọrụ. Ndị mmadụ na-atụkwasị ndị ọgbọ ha obi gbasara ụdị ahịa ọ bụla ọzọ.
Gbanye ndị ahịa ka ha bụrụ ndị ahịa kwesịrị ntụkwasị obi na ndị nkwado bụ ụdị akara ọ bụla chọrọ. Atụmatụ ndị a tụlere n’elu ka esi eme ka njide ndị ahịa na-azụta ga-ewulite njikọ siri ike na ndị ahịa gị, ma bulie akara ala gị. Usoro nhazi njigide nke onye na-azụ ahịa nke ọma ga-enyere gị aka ịkwalite ahụmịhe ndị ahịa.
Poket Ahịa Iguzosi Ike n'Ihe Mmemme Software
Akpa bụ usoro iguzosi ike n'ihe na CRM wuru maka ndị na-azụ ahịa na ndị ahịa. Poket uru na atụmatụ gụnyere:
Mfe Jiri - Site na ndebiri ndebe nke Poket, ị nwere ike ibido usoro mmemme nke ndị ahịa gị nke ọma n'ime nkeji 10.
Data Na-enyere Gị Aka ellre Mma - Ghọta usoro mmefu nke ndị ahịa gị. Ngwa nyocha Poket na-enye gị nnụnụ anya azụmahịa gị.
Ngwọta zuru ụwa ọnụ na-efu ego - Poket na-enye ikike ụlọ ọrụ dị ike na ọnụ ahịa kachasị ọnụ ahịa ị ga-ahụ n'ahịa.
Gaa dijitalụ, gaa na ekwentị - Gbanwee usoro mmemme gị nke na-agbanwe agbanwe, na-arụ ọrụ nke ọma. Poket na enyere gi aka ime ka ndi ahia gi rita uzo ha choro nkwanye ugwu ma gbaa ha ume ka ha laghachite.
Ezubere sọftụwia Poket iguzosi ike n'ihe ka ịgbalite azụmaahịa gị. Site na kaadị mpempe akwụkwọ dị mfe, gaa na ntinye aka itinye aka na ndị ahịa, Poket na-enyere gị aka jiri nwayọ wepụta usoro iguzosi ike n'ihe gị ka ọ bụrụ nke siri ike ma na-etinye ndị ahịa gị.
Bido na Poket
Tags: njigide ndị ahịaemailmmemme iguzosi ike n'ihemmekọrịta mmadụ na ibe yakeonwepost-ịzụtanjigidenjigide atụmatụechiche bara uru
Oliva nwere afọ 6 + nke ịzụ ahịa na mmepe azụmaahịa gafere ọtụtụ mpaghara na nnukwu ụlọ ọrụ dị nta. Ugbu a, ọ bụ onye njikwa azụmaahịa na Poket. Akpa bụ igwe ojii nke dabeere na Iguzosi ike n'ihe Management platform nke na-enyere ulo oru aka idowe ndi ahia ma bulie ahia.